कहिले आउँछ कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ? | Citizen Post News
कहिले आउँछ कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ?
सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा सुधार ल्याउन अनेक प्रसास गर्दै आएको छ । कर्मचारीलाई कर्तव्य र अनुशासनमा बाँधीराख्न विभिन्न नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था भएको छ । कर्मचारीले आफ्नो मनोवृति र कार्यसंस्कृतिमा सुधार गर्नेछु प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिरहेकै हुन्छन् । तर कर्मचारीवृतमा अपेक्षित सुधार भने भएको देखिदैन ।
ईमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ भई जनताको सेवामा समर्पित हुने सपथ खाएर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले अनुशासनको पालना नगर्ने तथा सरकारको आदेश अटेर गर्नेक्रम बढेको छ । भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्यमा मुछिएर समग्र कर्मचारी प्रशासनलाई लज्जास्पद वनाउँदै आएका कर्मचारीले सरकारको निर्देशन पालना नगर्दा सर्वसाधारणको विश्वास समेत गुमाउँदै गएका छन् ।
सरकारी कर्मचारीले सरकारलाई नै नटेर्ने तथा सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी नहुँदा नेपालको प्रशासन नतिजामुखी हुन नसकेको भन्ने गुनासो आइरहेको छ । सो विसंगति रोक्न सरकारको प्रयास जारी छन् । तर, जति प्रयास गरेता पनि कर्मचारीमा नटेर्ने प्रवृति हावी हुँदा सरकारका हरेक प्रयास सफल पंगु हुँदै आएको छ ।
निजामती कर्मचारीमा अनुशासनहिनता ,वेथिति तथा अनुचित कार्य मौलाउँदै गएको सरकारकै एक अनुसन्धानले देखाएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म एक हजार ५३४ कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले अनुशासन पालना नगर्ने ती कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेका अनुसार ३२ जिल्लाका ५१९ कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्दा समय पालना नगर्ने एक हजार १ सय ३५ र तोकिएको पोशाक नलगाउने ३ सय ९९ कर्मचारी रहेका छन् । ती कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयले चेतावनी पत्र दिने र सोको अभिलेख कार्यालमा राखिने भएको छ ।
दुई पटकसम्म चेतावनी परिसकेका कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी, केन्द्रमा अहिलेसम्म छड्के अनुगमन गर्दा कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएकामध्ये ७ सय ९९ कर्मचारीलाई कारवाही गरिएको बताइएको छ । कर्मचारीले अनुशासनहिनता प्रर्दशन गरेको तथा काममा अटेरी गरेको भेटिएपछि सतर्कता केन्द्रले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नु सकारात्मक पनि छ ।
तर त्यस्ता कर्मचारीलाई साँच्किै कारबाही हुनेमा शंका छ । किनकी अहिले मात्र होइन सतर्ककता केन्द्रले समयसमयमा कर्मचारीका कामप्रति निगरानी राख्ने र गल्ती गरेकालाई कारवाहीको सिफारिस गर्दै आएको छ । तर कर्मचारीले भने उन्मुक्ति पाइरहेका विगतको रेकर्डले देखाउँछ । स्थानिय निकायमा त कर्मचारीले अटेरी गरिरहेका छन् नैै । सरकारको मूलद्धारमै काम गर्ने कर्मचारीले पनि सरकारको आँखामा छारो हालेका छन् ।
प्रत्यक्ष निगरानी रहने प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालयका कर्मचारी अझै बढी अटेरी रहेको केन्द्रको अनुगमनका क्रममा फेला परेको छ । समयमा काम नगर्ने र कार्यालयमा नबस्ने प्रवृत्तिले समयको पालना र आफ्नो कर्तव्यप्रति कर्मचारी कतिसम्म बेपर्वाह र गैरजिम्मेवार छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई आधिकारिक पोशाक लगाउन सरकारले तलबमा भत्ता समेत थपेर दिन्छ ।
तर, नियम कानून उल्लंघन गर्दै कर्मचारीवृत्तबाट भइरहेको अटेरीपनले राज्य प्रशासनमा व्याप्त अनुशासनहिनतालाइ उदागों पारिदिएको छ । आफूमातहत रहेका कर्मचारीको यस्तो प्रवृतिप्रति गरेको अनुशासनहिनतालाई टुलुटुलु हेरिबस्ने प्रशासकीय प्रमुख समेत यसमा जिम्मेवार हुन्छन् । सरकार यतिवेला कर्मचारी समायोजनको प्रकृयामा छ ।
सरकारले खटाएका हरेक तह र तप्कामा पुगेर अफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सरकारले कमर्मचारीलाई आदेश दिईरहेको छ । तर सवै कर्मचारी कार्यस्थल पुगेका छैनन् । कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नजाँदा प्रादेशिक कार्यालयका काम प्रभावित बनेको गुनासा आइरहेका छन् । सरकारले खटाएका प्रदेश कार्यालयमा नजाने निजामती कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी त दिएको छ तर ठोस निर्णय गरेको छैन ।
निर्देशन अटेर गर्नेलाई कारबाहीः
सरकारको निर्देशन पालन नगर्ने कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ को ‘च’ अनुसार कारबाही हुन्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१ मा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनमा आफ्नो पदको जिम्मेवारी बहन नगरी सरुवा गरेको, खटाएको ठाउँमा नगई जिम्मेवारी अस्वीकार गर्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नहुने गरी बर्खास्तसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
कर्मचारीहरु एकपछि अर्को गर्दै दिनहुँजसो लज्जास्पद गतिविधी गर्ने गरेकोले समग्र कर्मचारीतन्त्र नै बदनाम हुन थालेको छ । सरकारी कर्मचारीका गतिविधीमा निगरानी राख्ने, गलत कृयाकलापलाई कानुनी दायरामा ल्याई दण्ड सजायको भागिदार बनाउने सम्वन्धमा विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था पनि गरिएको छ । तैपनि कर्मचारीहरु निसंकोच रुपले यस्ता कृयाकलापमा संलग्न भइरहेका देखिन्छन् ।
एकातिर सरकारलाई नटे्र्ने र आफ्नो मनलाग्दी गर्ने सवै कर्मचारी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर पक्राउ परेता पनि राजनीतिक संरक्षण पाएर उम्किने पनि त्यतिकै छन् । जसका कारण कर्मचारीतन्त्रमा दण्डहिनता मौलाएको छ । आफ्नो मात्र फाइदा खोज्ने बानी परेका कर्मचारीलाई न कानुनप्रति सम्मानको भाव छ, न त जनता र संस्थासँग डर ।
उल्टै निगरानी राख्ने निकायको छानविन तथा कारवाहीको शिलशिलाबाट हैरानी पाएको र निर्धक्क काम गर्न नसकेको बताउन थालेका छन् । निगरानीमा रहेका सरकारी कर्मचारीले पहरेदारी गर्ने निकायकै कामबारे टिप्पणी गरेर कार्यालयको समय विताउने गरेको पाईएको छ । सार्वजानिक निकायका व्यक्तिको कामको अनुगमन, मूल्याकंन तथा निरिक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरुले पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी कार्यालय सार्वजानिक संस्थान तथा अर्धसरकारी निकायका गतिविधीमा निगरानी बढाएका छन् ।
तैपनि कर्मचारी आनियमित कामवाट उम्कन समेका छैनन् । एक उच्च तहका कर्मचारीले सरकारलाइ नटेर्ने बानी परेका र पावरवाला कर्मचारीलाई त जति निगरानीमा राखेर पक्राउ नै गरे पनि दण्डको भागिदार वनाउन नसकिने बताउँछन् । कर्मचारीले व्यावसायिक मूल्य र मर्यादाको पालना नगर्नुमा कर्मचारी स्वम् मात्र नभइ उनिहरुभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी समेत दोषी छन् ।
आफू मातहतको कर्मचारीलाई पेशागत मूल्य अनुरुप परिचालन गर्न नसक्दा र उनीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याकंन पनि हचुवाको भरमा गरिदिँदा कर्मचारीमा अनुशासनहिनता बढ्दै गएको हो । कर्मचारीलाई पेशाप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन निर्णायक तहमा रहेका कर्मचारीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई बैज्ञानिक तवरले मूल्याकंन गरी वफादार कर्मचारीलाई वृति विकासको अवसर दिने र अटेरी कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने हो भने कर्मचारीवृतमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।